नेपाल आज | गन्तब्यविहिन यात्रामा हिँड्दा नेपालकै ठूलो प्रोफेसर (भिडियो सहित)
समाचार कभर स्टोरी अन्तरवार्ता भिडियो इतिहास र अनुभूति
विश्वविद्यालयमा इतिहासका पुर्व प्राध्यापक रहेका डा. सुरेन्द्र केसी नेपालको अग्रपंक्तिका राजनितिक विश्लेषक हुन् । डा. केसी त्रिवीमा प्राध्यापक रहँदा देशैभरी इतिहाँस पढ्ने विद्यार्थी शून्यजस्तै भएपनि उनको कक्षामा भने विद्यार्थीको भिडले खचाखच भरिन्थ्यो । एउटै कक्षामा तिनसय भन्दापनि बढी विद्यार्थी हुन्थे । शिक्षण गर्न माइक नै आवश्यक हुन्थ्यो ।
डा. केसीले लोकसेवा आयोगअन्गर्तत सहसचिवस, सेनाका कर्णेल, प्रहरीका एसपीसम्मलाई पढाउन भ्याएका छन् । उनि सबैभन्दा बढी क्षेत्रकालाई पढाउनेमा सिमित व्यक्ति भित्र पर्छन् । डा. केसीले नेपालको वामपन्थमा पीएचडी गरेको छन् । यही विषयमा सात किताब लेखेकोछन् ।
नेपालको राजनितिको बारेमा खरो विश्लेषण गर्ने डा. केसीले लोकतन्त्रको बारेमा पञ्चायतको बारेमा नेपाल आजसँगको छलफलमा आफ्नो अनुभव व्यक्त गरेकाछन् । पञ्चायतकालमा अहिलेको भन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक संस्कार भएको डा. केसीको प्रतिक्रिया छ । देसमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ भनेता पनि राजनितिक दलका नेताहरुको व्यवहार भने लोकतान्त्रिक नभएको उनको तर्क छ । अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनितिक दलको हस्तक्षेप भएको उनि बताउँछन् । डेमोक्रेसी भनेको सामान्य अर्थमा मेरिटोक्रेसी भएपनि नेपालमा मेरिटोक्रेसीको अभ्यास नै नहुने उनको तर्क छ ।
योग्यताक्रमका आधारमा कुनै पनि क्षेत्रमा जाने अबसर अहिले नभएको उनि बताउँन् । उनि भन्छन्, ‘डेमोक्रेसी भनेको मेरिटोक्रेसी हो तर अहिले त्यो अवस्था पनि छैन । यो भन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास पञ्चायतमा नै थियो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था भएपनि त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्रोफेसर, डिन विभिन्न राजनितिक दलका थिए । उनिहरु योग्यताक्रमबाट छनोट भएर आएका थिए । तर अहिले हेर्नुस् जहाँ पनि राजनितिक दलका कार्यकर्ता बाँहेक कोहि छैन । योग्य व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगेको छैन ।’
डा. केसीले अहिलेको व्यवस्थाले आफ्नो ज्ञानको कदर नगरेको मात्रै नभएर आफुलाई बोल्न बाट समेत रोक लगाउन खोजेको बताएकाछन् । आफुले गरेको राजनितिक विश्लेषण राजनितिक दलको ताबेदारीमा नहुँदा सञ्चार माध्यमबाट उनका अन्तर्वार्ता प्रसारण हुनबाट रोक लगाएको उनि बताउँछन् । मुलधारका मिडिया भनिने सञ्चार गृह राजनितिक दलको संरक्षणमा चल्ने हुँदा आफ्ना लेख र विचार प्रकाशन तथा प्रशारण हुनबाट रोक लगाएको उनि बताउँछन् ।
राजनितिक दलहरुले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गर्न खोजे पनि प्रविधिका कारणले उनिहरु सफल नभएको डा. केसीको भनाई छ । उनि भन्छन्, ‘नेपाली समाज गुण र विवेकी समाज होइन । नेपाली समाज तेरो र मेरो भन्ने भावनाबाट चलेको छ । राजनितिक दलको प्रभावले मेरा अन्तर्वार्ता छाप्न र प्रकाशन गर्न निषेध गरियो । तर प्रविधिले गर्दा उनिहरुको अभियान सफल भएन । अहिले धेरै अन्तर्वार्ता दिने र हेरिने व्यक्ति भित्र पर्छु र त्यो अन्तर्वार्ताबाट विश्वव्यापी रुपमा चिनिएको मान्छे म हुँ । यसबाट म सन्तुष्ट छु ।’
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी अन्तरवार्ता इतिहास र अनुभूति